छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा, सम्धीनी लिएर फ’रार ! – AB Sansar
November 4, 2020 adminLeaveaComment on छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा, सम्धीनी लिएर फ’रार !
छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा, सम्धीनी लिएर फ’रार ! छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा, सम्धीनी लिएर फ’रार !
भारतको गुजरातमा भएको एक घ’टनाले त्यहाँका मानिसहरु अ’चम्ममा परेका छन् । सो घ’टनाले प्रेम अ’न्धो हुन्छ भन्ने हरफलाई सत्य सावित गरेको छ । विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवै राजीखुशी थिए तर अचम्मत तब भयो जब दुलाहाका बुबा र दुलहीकी आमा बे’पत्ता भए । विवाहको एक हप्ता अगाडिनै दुलाहाका बुबाले सम्धीनी भ’गाएपछि उनीहरुको बिहे स्थगित भएको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् ***
बेहुलाका ४८ वर्षीय बुबा व्यापारी हुन् भने बेहुलीकी ४६ वर्षीया आमा राजनीतिक पार्टीकी कार्यकर्ता हुन् । पुस २५ गते भागेका उनीहरुले बाल्यकालदेखिनै छिमेकीको रुपमा एक अर्कालाई चिनेका थिए । बुबा सुरतको कतरगाम क्षेत्रबाट ह’राए भने आमा गुजरातको नवसारीमा आफ्नै घरबाट हराइन् । दुवै जना बे’पत्ता भएपति परिवारले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएको भारतीय सञ्चामाध्यमले जनाएको छ ।
घ’टना फैलिएपछि एक नातेदारले उनीहरुले बाल्यकालदखिनै एक अर्कालाई चिनेको कुरा बाहिर ल्याएका छन् । एउटै टोलमा बस्ने हुनाले उनीहरू सानैदेखि मायामा परेको समेत खुलेको छ ।विवाहपछि पनि स’म्बन्ध रहेकाले उनीहरू भागेको हुनसक्ने साथीहरूले बताएका खबर आजको समाचार पत्रले उल्लेख गरेको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
७० बर्षमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकी नानीमैया श्रेष्ठ आमा
प्रेमिकाले ब्रेकअप दिएपछि खुट्टा समाएर मायाको भिक !